Kondhomyada Mercadona, lagu kalsoon yahay? | Ragga Stylish
Xaqiiqdii waligaa waligaa waad rabtay ama isticmaashay qaar Kondhomka Mercadona markay tahay galmo. Qiimayaashooda hoose waxay ka dhigayaan kuwo la awoodi karo oo tayadoodu aad u wanaagsan tahay. Marka la eego sicirada cinjirka sida Durex ama Control, qofku wuxuu laba jeer ka fikirayaa haddii tayada cinjiryadan ay ku filan yihiin in lagu iibiyo qiimahaas. Badbaadada kondhomku waa muhiim hadii aan rabno inaan iska ilaalino xaaladaha aan habooneyn. Kondhom wanaagsan oo fuliya shaqadiisa wuxuu na badbaadin karaa kumanaan yuuro mustaqbalka.
Qoraalkan waxaan ku falanqeyn doonnaa in cinjirka galmada ee loo yaqaan 'Mercadona' ama cinjirka la isku halleyn karo iyo in kale iyo tayada ay leeyihiin. Miyaad shaki ka qabtaa mawduucan oo aad dooneysaa inaad hubiso inaad isticmaasho iyo in kale. Sii wad akhriska, maxaa yeelay wax walba waan kuu sheegi doonaa.
1 Qiimaha iyo cinjirka galmada
2 Cinjirka galmada ee 'Mercadona' sumadda
3 Aqbalaada bulshada
4 Wax ku oolnimada kondhomyada Mercadona
Qiimaha iyo cinjirka galmada
Dad badan, galmada waxay ku kacdaa lacag. Waxa jira cilaaqaadyo badan oo aad usbuuca oo dhan la yeelan karto lammaanahaaga ama qof kale baahida loo qabo kondhomkuna waa soo dhowdahay. Haddii aan leenahay qiimaha celceliska suuqa, waxaan u kuur galeynaa inay ku dhow yihiin 6 euro 12kii cutubba. Haddii aad isku celcelis yeelato 1 ama 2 xiriir galmo maalintii, waan nahay kharash gareyso ilaa 4 ama 6 euro todobaadkii ilaalin. Tani waxay ka dhigeysaa in ka badan 20 euro bishii.
Haddii haweeneydu aysan isticmaalin kiniin ka hortag ah ama qaab kale, isticmaalka cinjirka galmada waa lama huraan haddii aan dooneyno inaan ka baxno xaaladaha ceebta iyo cabsida "malab, wali ma aanan soo kicin." Intaas waxaa sii dheer, in badan oo ka mid ah waxay u baahan yihiin cinjirka galmada wax badan sariirta ku taag.
Dhibicda dareenka leh & Xakamaynta khadadka
Kondhomyada Xidhmada Durex ...
Gudaha Mercadona waxay ku iibiyaan cinjirka galmada cinjirro leh dhadhan, ganaax, caadi iyo noocyo kale oo u eg kuwa ugu caansan noocyada, laakiin qiimo aad u hooseeya Sumadda ay wataan ayaa ah oo ay aad u sarreeyaan.
Qiimaha noocyada kala duwan ee cinjirka galmada ee lagu iibiyo Mercadona waxaan haynaa waxyaabaha soo socda:
Xirmo ka kooban 12 kiciyayaal (ganaax): 3,60 euro.
6-baakad madadaalo (midabbo iyo ur): 2 yuuro.
Xirmo ka kooban 12 unug dareen dabiici ah: 3,30 euro.
Xirmo ka kooban 12 cutub Ultrafino 0,004 (midka ugu casrisan): 5,90 euro.
Iibinta ugu fiican illaa iyo hadda waa mid caadi ah oo ku kacaya 2 euro. Waxay ka badan tahay kala badh waxaad keydiso adoo iibsanaaya cinjirka noocaan ah halkii aad ka iibsan laheyd noocyada dhaqanka. Tani waxay noo horseedaysaa inaan ka fikirno nabadgelyadooda iyo tayadooda.
Cinjirka galmada ee 'Mercadona' sumadda
Sumadda ON waxaa iska leh shirkad laga leeyahay Japan oo la yiraahdo Okamoto. Shirkadani waxay in ka badan 80 sano khibrad u leedahay cinjirka galmada iyo badbaadada galmada.
Magacani kuma baahin Isbaanishka marka la fiiriyo jahligiisa ilaa Mercadona iyaga la iibiyay. Si kastaba ha noqotee, Aasiya waa tixraac ay adeegsadaan malaayiin deggan.
Shirkadda lafteedu waxay sharraxeysaa habka loo soo saaro cinjirkaan cinjirka ah iyagoo leh nabadgelyo buuxda iibkooda. Waxay isticmaalaan xarun cinjir ah oo Okamoto soo saartay oo dammaanad qaadaysa wadarta xoogga iyo badbaadada galmada. Faa'iidada ay leeyihiin ayaa ah, in kasta oo ay ka kooban yihiin, aad ayey u dhuuban yihiin oo way jilicsan yihiin taabashada, sidaa darteed khibradda galmada way sii kordheysaa. Waxaas oo dhan qiimo jaban haddii aan barbar dhigno noocyada kale ee soo jireenka ah.
Si loo damaanad qaado loona dejiyo cabsida macaamiisha ee ku saabsan wax soo saarkooda, Okamoto wuxuu cadeynayaa baaritaanada kondhom kasta la marsiiyey. Kondhom kastaa wuxuu maraa tijaabooyinka biinanka elektiroonigga ah oo, haddii uu leeyahay nooc dalool ah, gebi ahaanba la diido lagumana soo saaro iib dambe. Kaliya kondhomyada aan lahayn godad ayaa ka gudbaya baaritaanka waana la iibin karaa.
Tijaabadan ka sokow, waxaa lagu qaadaa shan shaybaar oo kale. Mid ka mid ah waa daadashada biyaha. Haddii durdurka biyuhu uu dhex maro kondhomka oo uu dhex maro, si otomaatig ah ayaa loo tuuraa. Imtixaanada dilaaca iyo walbahaarka waxay muujinayaan adkaanta iyo iswaafajinta qalabka lagu farsameeyay waxayna u ogolaaneysaa dammaanad qaadka amaankiisa isticmaalka.
Ku gudubka tijaabooyinkan waxay noo xaqiijineysaa in cinjirkaasi si buuxda loogu diyaar garoobay iib ahaan.
Waxa jira dad badan oo ka fikira ama ka fikira cinjirrada 'Mercadona' oo ay sii daayaan faallooyinka sida "uma qalmaan xitaa balooniyada" ama "aad ayey u dhib yar yihiin". Marka tan la eego, waa in la sheegaa inay jiraan malaayiin dhadhan oo ay jiri doonaan dad dareemaya raaxo badan iyaga iyo kuwa kale oo doorbida inay bixiyaan lacag badan si ay u dareemaan nabadgelyo.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka daadadka iibka ee qaybo badan oo ganacsi ayaa ah hubin la'aanta macaamilka ee ku saabsan badbaadada iyo waxtarka sheyga. Qiimo sare oo nagu soo food leh, waxaan dareemeynaa deganaan waxaana u maleyneynaa inay si sax ah u shaqeyn doonto. Ma jiraan wax runta ka sii fog, waan layaabi karnaa tayada alaabada lagu iibiyo qiime ka hooseeya.
Qiimaha badeecadu waa natiijada dhammaan wax soo saarka, gaadiidka iyo kharashyada canshuuraha oo lagu daray faa iidada faa'iidada. Waxay kuxirantahay farsamooyinka wax soo saarka, qalabka la isticmaalay, suuqgeynta iibka iyo natiijada ay heleen macaamiisha, waxaad dooran kartaa mid ama mid kale. Astaanta ON dhib ayey ku tahay wax xayeysiin ah oo ku saabsan alaabteeda sida noocyada kale sida Durex ama Control do. Tani waxay iyaga siinaysaa qol badan oo ka mid ah qiimahooda.
Wax ku oolnimada kondhomyada Mercadona
Marka aan falanqeyno qiimaha iyo tayada, waa inaan diirada saarnaa waxa dhabta ah ee kondhomka ku jira: badbaadada iyo raaxada. Moodooyin badan oo soo baxa (khafiif ah oo dheeri ah, xasaasi ah, oo leh qaabab, kuleylka, iwm.) Waa inaad ka fikirtaa inaysan waligood la mid noqon doonin sidii haddii aanaan wax xirnayn. Sidaas darteed, Ma iska yeeli karno inaan dareemeyno wax la mid ah kondhom la'aantood.
Haddii sumadda 'Mercadona ON' ee cinjirka galmada ay na siiso kondhomyo leh badbaado guud, oo leh moodooyin kala duwan oo noo dammaanad qaadaya khibrad fiican oo ku saabsan galmada oo aan ku guuleysanno himilada ah inaanan dhibaato ku qabin uurka ama faafa cudurrada, maxaan wax badan uga bixin doonnaa summad dhaqameed?
Waxaan rajeynayaa in falanqeyntan aan ka dhigi karo shakigaaga ku saabsan cinjirka noocan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Kondhomyada Mercadona, lagu kalsoon yahay?
Waxaan iibsaday cinjirkaan cinjirka ah midka labaadna waxaan isticmaalay waa inaan aado farmashiyaha si aan u iibsado subaxa kaniini ka dib maxaa yeelay way jabtay ... Aad uma fiicna.
Si kastaba ha noqotee, waxaan isticmaalaa dareenka dabiiciga ah sanado badan iminkana ma badalo ... cillada kaliya ee jirta ayaa ah in aanan arkeyn cabirka sumadan meelkasta ... waana fiicnaan laheyd inaan ogaado sababta oo ah waxaa jira waqtiyo ay iga adkeeyaan in ka badan kuwa kale ... Ma aqaano inay noqon doonto dareenkeyga iyo in kale ... Waan ka helaa jawaabaha. Mahadsanid
Waxaan bilaabay inaan adeegsado maxaa yeelay durex iyo xakameyn labadaba wax badan iyo hal mar ayey nagu guuldareysteen oo inaad raadsato magac kale waa inaad aadaa dukaamo khaas ah oo aan wax qalad ah sameynin, badiyaa ma joogaan gacanta marar badan. Weligey la iguma aaminin kondhomka calaamadda cad, laakiin waxaan ka raadiyay tixraacyo dhowr ah waxaanan isku dayay ONs. Waxaan isticmaalayay sanado badan waana inaan dhahaa ma aqaano inay noqon doonaan kuwa ugu fiican iyo in kale, laakiin ma aysan bixin hal qalad. Waa run in okamoto aysan astaan ​​tixraac ah u ahayn Spain laakiin waddamada kale waa la yaqaan oo waa laga mahadceliyaa.